Huawei P20 နှင့် P20 Pro: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း | Androidsis
လပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်, Huawei ၏အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်ပြိုင်ပွဲကိုပဲရစ်မြို့တွင်ပြုလုပ်သောပွဲတစ်ခုတွင်ပြသခဲ့သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သည်ယခုနှစ်အစောပိုင်းကအခြားအမှတ်တံဆိပ်များကဲ့သို့ MWC 2018 တွင်မဟုတ်ဘဲဤပွဲတွင်၎င်း၏မော်ဒယ်များကိုတင်ဆက်သွားမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့နေ့ရောက်လာပြီ။ Huawei P20 နှင့် P20 Pro တို့သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပြီးဖြစ်သည်. High-end ကနေဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်သလဲ။
ဤလများအတွင်းဖုန်းများသည်မှတ်ချက်များစွာထုတ်ပေးနေခဲ့သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိနိုင်ပါပြီ။ Huawei P20 Pro ၏သုံးဆကင်မရာလိုမျိုး။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာဒီနှစ်ထဲမှာမျှော်လင့်ထားဆုံးဖုန်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ပြီးသားကိုငါသိ၏ နှစ်ခုမော်ဒယ်များ၏အပြည့်အဝသတ်မှတ်ချက်များ.
Huawei သည်ယခုနှစ်တွင်ဤဖုန်းအသစ်များနှင့်အတူအမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင်အကြီးအကျယ်လောင်းနေသည်။ သူတို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ကအရည်အသွေးကောင်းတဲ့ခုန်ကျော်မှုကိုရယူခဲ့သည်။ စျေးကွက်ရှိသူတို့၏အနေအထားကိုခိုင်မာစေရန်နှင့်အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးမြင့်စက်ပစ္စည်းများမည်သို့လုပ်ရမည်ကိုသူတို့ပြသသည့်အလောင်းအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းပိုမိုတစ် ဦး ချင်းစီပြောပြပါ Huawei P20 နှင့် Pro Pro တို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
1 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Huawei P20
1.1 Notch နှင့်ရှေ့လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ
2 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Huawei P20 Pro
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Huawei P20
high-end ကိုနာမည်ပေးတဲ့ဖုန်းကစတယ် ၂၀၁၈ အတွက်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအဆင့်မြင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုမ္ပဏီအတွက်အရည်အသွေးမြင့်တက်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည့်ပြည့်စုံသောမော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းအတွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အံ့သြစရာများများစားစားမရှိပါ။ သို့သော်အမှန်တရားမှာဤကိစ္စတွင်မလိုအပ်ပါ။ ။ ဒါတွေဟာ Huawei P20 အသေးစိတ်အချက်အလက်များ:
operating system EMUI 8.1 ဖြင့် Android 8.2 Oreo
ဖန်သားပြင် Full HD + resolution ဖြင့်လက်မ ၅.၈ လက်မ
Processor ကို 970 GHz အမြန်နှုန်းဖြင့်ရှစ် core နှင့်အတူ Kirin 2.36
GPU ကို မာလီ G72
နောက်ကင်မရာ 20 + 12 အမတ်များf/ 1.6 နှင့်f/ 1.8 နှင့်အတူ MP
ဆက်သွယ်မှု4×4MIMO Wifi LTE Cat 18 USB Type C
ဘက်ထရီ အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းနှင့်အတူ 3.400 mAh
စြေး 649 ယူရို
ပထမဆုံးဖုန်းပေါက်ကြားမှုနှင့်အတူဖုန်းသည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့ပြီး ဖုန်းကိုထစ်ရှိပါတယ်ကတည်းက။ ဤကိစ္စတွင်၌က အနည်းငယ်သေးငယ်ထစ် iPhone X လိုမျိုးမော်ဒယ်တွေမှာတွေ့ရတာထက်စာရင်ဒါကပိုပြီးပုံသေဖန်သားပြင်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်aကိုအသုံးပြုရန်ရှာသည်Android P ဖြင့်ရောက်ရှိလာမည့် Notch ဖြင့်ဖန်သားပြင်များအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း.
Huawei P20 ၏ဒီဇိုင်းသည်အာရုံကိုဆွဲဆောင်သည်။ ဒါ့အပြင် ဖုန်းရဲ့ရှေ့ဖက်မှာရှိတဲ့ fingerprint sensor ကိုပေါင်းစပ်ထားတယ်။ သုံးစွဲသူများစွာစောင့်ဆိုင်းနေသည့်အသေးစိတ်တစ်ခု။ ထို့အပြင်၎င်းအာရုံခံကိရိယာသည်၎င်းနှင့်အတူသွားလာနိုင်ခြင်းကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မည်။
ဒါဟာအံ့သြစရာပါ ရှေ့ခလုတ်ကိုရှေ့မှောက်တွင်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အမှတ်တံဆိပ်အမြောက်အများက၎င်းကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အတွက်အလောင်းအစားပြုနေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ Huawei သည်ဤဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသည်။
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Huawei P20 Pro
ဒုတိယနေရာမှာခေါင်းစဉ်အများဆုံးထုတ်နိုင်တဲ့ဖုန်းရှိတယ် ကုမ္ပဏီ၏ဤ high-end အကွာအဝေးအတွင်း။ နောက်ဘက်တွင်၎င်း၏သုံးဆကင်မရာတည်ရှိမှုကတည်းကမှတ်ချက်ပေးများစွာ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အန်းဒရွိုက်ဈေးကွက်တွင်တော်လှန်ရေးအပြင် ဤမျှလောက်များစွာသောဤဖုန်းကိုမျှော်လင့်နေသည်။ ဒါတွေဟာ Huawei P20 Pro ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ:
Huawei P20 Pro နည်းပညာသတ်မှတ်ချက်များ
ပုံစံ P20 Pro ကို
ဖန်သားပြင် ၆.၁ လက်မ AMOLED ကို ၁၈.၇: ၉ အချိုးနှင့် Full HD + resolution (6.1 x 18.7 pixels)
Processor ကို အတုထောက်လှမ်းမှုအတွက် NPU နှင့် Huawei Kirin 970
နောက်ကင်မရာ Triple 40 MP RGB (f / 1.8) + 20 MP Monochrome (f / 2.6) နှင့်5MP RGB Telephoto (f / 2.4) နှင့် OIS တို့ပါ ၀ င်သည်။
ဘက်ထရီ အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းနှင့်အတူ 4.000 mAh
နှစ်ခု၏စျေးအကြီးဆုံးမော်ဒယ်နှင့်အပြည့်စုံဆုံး။ စင်ကြယ်သောပါဝါကိုကျူးလွန်သောအတုထောက်လှမ်းရေးသည်အဆုံးအဖြတ်ပေးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သောဖုန်းတစ်လုံး။ ဖုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးခြားဆုံးအချက်မှာ၎င်း၏နောက်ကင်မရာဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာကုမ္ပဏီကကင်မရာသုံးချောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ Huawei P20 Pro ၏အဓိကမှန်ဘီလူးသည် MP 40 ဖြစ်သည်။ အခြားသူများ 20 +5အမတ်ဖြစ်ကြနေစဉ်။ ဒီသဘောအရတစ် ဦး ကအစစ်အမှန်နဂါး။
အဆိုပါ # HuaweiP20Pro maak je ook 's nachts de mooiste foto's, dankzij de Hand Held Night Mode ။ သငျသညျ verstaan ​​Zonder statief ။ pic.twitter.com/0fxJdOjCiw
- HuaweiMobileNL (@HuaweiMobileNL) မတ်လ 27, 2018
ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူများသည်အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင်ကြီးမားသောပုံရိပ်များကိုရိုက်ကူးနိုင်မည်ဖြစ်သည် အတုထောက်လှမ်းရေး၏အကူအညီဖြင့်ရလဒ်ကောင်းများသည်။ အလင်းနည်းသောအခြေအနေများတွင်သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်သည့်ပုံစံဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်မည်ဆိုပါက။ တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်အလွန်ဂုဏ်ယူကြောင်း၊ DXOMark အခြေခံစံနှုန်း, ဖုန်းကိုစျေးကွက်အတွက်၎င်း၏အဓိကပြိုင်ဘက်အနိုင်ရမယ့်ရမှတ်ရရှိသွားတဲ့။
ဘယ်လိုမဟုတ်ရင်ဌဖြစ်နိုင်ပါတယ်Huawei ၏အဆင့်မြင့်သည်မျက်နှာ၏အသိအမှတ်ပြုမှုကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ ယနေ့ခေတ် Android ဖုန်းအများစုတွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နေရသောအရာများနှင့်မတူညီသောစနစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့ကင်မရာကိုသုံးလို့မရဘူးလေ။ ယင်းအစား၎င်းတွင်၎င်းစနစ်သည်အလုပ်လုပ်ရန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အာရုံခံကိရိယာရှိသည်။ ဒါဆို iPhone X ရဲ့ Face ID နဲ့ပိုနီးသည်.
ဖုန်းနှစ်လုံးရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုလူသိများသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီသောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ကျန်ရှိနေသေးသည်။ သူတို့ဘယ်စျေးနှုန်းရှိသလဲ ဘယ်တော့သူတို့စတိုးဆိုင်များတွင်ပြန်လာကြမလဲ ကံကောင်းတာကကျနော်တို့မှာဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေရှိတယ်။ ထို့ကြောင့် Huawei P20 နှင့် P20 Pro တို့၏စျေးနှုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည် ၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောဗားရှင်း၌တည်၏။ အောက်မှာပြောချင်ပါတယ်။
Huawei P20 ကို ၆၄၉ ယူရိုဖြင့်ရောင်းချမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။။ စျေးကွက်တွင်အရောင် (၄) မျိုးဖြင့်အနက်ရောင်၊ အပြာ၊ ပန်းရောင်နှင့် Twilight (lilac နှင့်အစိမ်းကိုရောစပ်ပြီးထောင့်ပေါ် မူတည်၍ အရောင်ကိုပြောင်းလဲစေသည့်သေံ) ဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့စတိုင်ဘယ်လိုပဲနေပါစေ၊ #HuaweiP20 ဒါကမင်းနဲ့ကိုက်ညီလိမ့်မယ် #ပိုကြည့်ပါ #အိုး pic.twitter.com/k7DheZNkyH
- Huawei Mobile Spain (@HuaweiMobileESP) မတ်လ 27, 2018
Huawei P20 Pro ကိုအရောင်လေးမျိုးနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Twilight သည်သုံးစွဲသူများကိုအောင်နိုင်သူဖြစ်ပုံရသည်မှာသေချာသည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, ဒီမော်ဒယ်ကပိုစျေးကြီးလိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်၌ရှိလိမ့်မည် ၉.၉၉ ယူရိုစျေးနှုန်း ငါတို့နိုင်ငံရှိစတိုးဆိုင်များကိုရောက်တဲ့အခါ။
ယင်းကိုထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက်၊ modelsပြီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင်မော်ဒယ်လ်နှစ် ဦး သည်စပိန်နိုင်ငံရှိစတိုးဆိုင်များသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် MediaMark ကဲ့သို့သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များတွင်၎င်းတို့သည်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာသူရဲ့ပစ်လွှတ်မှုဟာတကယ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei P20 နှင့် P20 Pro: Huawei ၏အဆင့်မြင့်အဆင့်ရှိ
Aprilပြီလတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့သည် 2018 ၏ Motorola အသစ်ကိုတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ